Khilaafkii labada Aqal ee Baarlamanka oo la xaliyey
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa kaalin ka qaatey xalinta khilaafkii u dhaxeeyay labada aqalka ee Baarlamanka Soomaaliya kadib kulan ka dhacay xarunta Madaxtooyadda.
Madaxweyne Farmaajo, madaxda Maamulada iyo gudoonka labada aqal oo ay wehliyaan ku xigeenadooda ayaa ku kulmay Villa Soomaaliya; warar horudhac ah waxay xusayaan in ay isla qaateen in baarlamaanka uu si wadajir ah u meelmariyo heshiiska doorashooyinka 2020-21.
Khilaaf ayaa keenay in meesha laga saaro kaalintii Aqalka Sare ee ka doodista iyo ansixinta hindise sharciyeedyada Xukuumadda soo gudbiso, iyadoo la baal-mariyay sharciyo badan oo kasoo ka yimid Gollaha Shacabka.
Aqalka Sare ayaa ku eedeeyay dhowr jeer gudoonka Gollaha Shacabka ku-tumasho dastuur iyo inuu wax ka bedel ku sameeyay qodobo kamid ah sharciga doorashooyinka ee dhawaan la ansixiyay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa isagoo ka faa'idaysana dhex-dhexaadinta Madaxda dowlad Goboleedyada soo afjaray khilaafka, waxaana lagu soo beegay tallaabadan xili xusul-duub loogu jiro meel-marinta heshiiska doorashadda.
Aqalka sare oo bedalay xiliga uu furmayo Kal-fadhigiisa 4aad
Soomaliya 08.10.2018. 22:49
Waxaa ala filayay inuu furmo kalfashigan 10-ka bishan balse isbedel ayaa ku yimid...